Third World amazwe: izinkinga zabo futhi izici
Izindaba Umphakathi, Inqubomgomo
Igama elithi "amaZwe" savela kuyi-isigamu kwekhulu lamashumi amabili yesibili ubheke States bengaphumi okubizwa ngokuthi izingalo uhlanga, olwaqala engamashumi amabili ngemuva kokuphela kwempi yezwe yesibili. ukuqonda Modern le nkulumo esakuthola engumFulentshi Alfred Sauvy, ngubani eyanyatheliswa ngo-1952 isihloko kwelinye athandwa ngesikhathi izincwadi. Emsebenzini walo, uShobi kuqhathaniswa nomqondo Third World (ekuthuthukiseni) umqondo ekilasini lesithathu lwabantu umphakathi wendabuko. Ngakho-ke, isici esiyinhloko Okwesithathu World ne 80s kwekhulu lama-20 ayebhekwa ezingeni eliphansi emalini lengenako, le backwardness emkhakheni wezomnotho, ezombusazwe kanye umkhakha kusuka kwamanye amazwe emhlabeni.
Ukuze uqonde ukuthi iyizwe yezwe yesithathu, kumelwe siqale siqonde ukuthi isimo elibizwa athuthukile. Ngokuthi ezweni asethuthukile, okuyinto uhulumeni uyakwazi ukunikeza izakhamuzi zalo nje ngokushiya impilo enethezekile futhi unempilo ngaphansi kwesimo endaweni ephephile. Esikhathini uhlu lamazwe lanamuhla asethuthukile: France, e-Australia, Sweden, e-Italy, Israyeli, eJalimane, e-USA, Japan, i-Vatican, Portugal, njll Izici eziyinhloko asathuthuka namuhla: yokuntuleka noma isisho ababuthakathaka yelinyenti, engazinzile emakethe umnotho, ukuntuleka kumalungelo omphakathi kanye iziqinisekiso.
Ngakho, asathuthuka - izwe nge ezingeni eliphansi intuthuko yezenhlalo nezomnotho. Njengesigaba 'somphathi ihlanganisa zonke uthi mpumalanga yeNingizimu Melika, i-Afrika kanye iningi Asia. Basuke izimpawu imodeli ubudala, kwezomnotho, iholo elincane, abampofu, ohlelweni lwemfundo. Ngokokunye ukulinganisela, 20% of the omdala labantu Afrika okwamanje ahlale abafundile. Ukhiye Emazweni asathuthuka, obizwa nangokuthi zezimboni, idlule ezingeni odlule ukuthuthukiswa komnotho. Ziyakwazi: South Korea, Turkey, India, ePhilippines, Singapore, Mexico, njll
Ngokusho ucwaningo nge zezenhlalo, amazwe yezwe yesithathu zinezikhathi:
- kanye nezokulima kanye nokutholakala eluhlaza impahla orientation emnothweni;
- lizinga leliphansi kwetisebenti;
- ukuba khona esikhathini esidlule njengoba ikoloni;
- heterogeneity we senhlalo.
Icacisa indima iminotho kwamaningi ala mazwe usenayo ekuthuthukeni kwezolimo kanye yezandla. Cishe kuwo wonke amazwe wesithathu ngokuphelele kwaze kwaba sekhulwini lama-20 ezazikhona ifomu amakoloni, okuyinto ayikwazanga kodwa kuthinta lokuthuthukiswa komnotho wabo kanye nezimboni. Emazweni emuva kakhulu emhlabeni ekuthuthukisweni zihlanganisa: Ethiopia, Tanzania, Laos, Somalia, Honduras, Guatemala. Kumele ukuthi iningi emazweni asathuthuka yaseNingizimu Afrika njengamanje ekucindezelekeni. Lezi uthi ngeke likwazi ukunikeza izakhamuzi zalo ithuba udle kahle, ukuze babe nophahla phezu kwekhanda lakhe, ukuthola imithi yokwelashwa ngesikhathi esifanele, khona izikhungo zemfundo. Nokufa kula mazwe endlaleni, izifo nokubulala kuphezulu kakhulu. Abahlala ezindaweni ezihlushwa kwezomnotho evumayo nangenkathi amazwe ukujabulela ngokuphepha zonke izinzuzo impucuko futhi silwele nokuzimela ngokwezimali, kanti ingxenye umkhaya wesintu uyaqhubeka ukuphila ezimweni abampofu kakhulu kwamahlathi asezindaweni ezishisayo noma enyakatho ekude.
Isici esikhethekile emazweni amaningi asathuthuka ukuthuthukiswa kwezokuvakasha njengoba umsebenzi oyinhloko lalolo hlanga. Kugeleza abahambi inikeza impahla inhlalakahle amaningi izakhamuzi zakhona. Namuhla-ke alikho endaweni emhlabeni lokho kwakungeke wavakashela isihambi ukwazi. Ngakho-ke, singasho ngokuphepha abaningi emuva nemibuso yezwe ngokuya emnothweni idlule kwatheleka wabo wonyaka we izivakashi.
Indaba ukuthi wafa kanjani futhi Gorbachev
Inkulumo Agitational, noma ufunde ubuciko sasobala
Ifomu uhulumeni - kuba isimiso kanye simiso kumiswa uhulumeni
Sibalo Political Heydar Aliyev: Biography, izici imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Polufashist, polueser - Nasser Gamal Abdel
National Security Council - kuyini? NSDC Ukraine
Ngingasitholaphi izikweletu zentela
Ukuzinza lwezezimali - ngesisekelo ukuthuthukiswa koMnotho amabhizinisi ngabanye kanye isimo sisonke
Chestnut ngoba amalunga omzimba. Tincture chestnut ngoba amalunga omzimba
Ama-Ansel Adams: Ubuhle obunamakha
Ingabe intando yeningi badinga umnotho emakethe? isayensi Social: kangakanani ngentando yeningi labantu kanye emakethe umnotho
Toppings ezinjalo ezahlukene pizza
Kungakanani nalapho ukwengeza uviniga isobho?
Abalingisi 'iNkosi Izindandatho: I Towers Amabili ": incazelo izindima engcono
Uhlu, amagama, ukuphakama: Chelyabinsk esifundeni Intaba
Article 264 of Criminal Code of the Russian Federation nekuphawula. Ukwephula imithetho yomgwaqo kanye nokusebenza izimoto